Umgangatho ophezulu weSantya sePhepha leNdebe yePhepha elenziwa nguMatshini mveliso kunye nabenzi | Umatshini waseChengda
Umatshini weNdebe yePhepha
Iphepha leLid Machine
Umatshini oDonga kabini
Umatshini weBhokisi yabaNikeli
Umatshini ochanekileyo weTyhubhu
Isantya esiphezulu seNdebe yePhepha elenza uMatshini
Umatshini wendebe yephepha okrelekrele weShunda SMD-90 usebenzisa ubeko lwe desktop, eyahlulahlula iindawo zokuhambisa kunye nokubumba.Icandelo lokuhambisa liphantsi kwedesika, ukungunda kulapha edesikeni, olu luhlu lulungele ukucocwa kunye nolondolozo.
Umatshini wamkela ukuthambisa okuzenzekelayo, ulwakhiwo lokuhambisa i-axis longitudinal, uhlobo lwe-barrel ye-cylindrical indexing kunye ne-gear drive, eqinisekisa uzinzo kunye nomgangatho womatshini wonke.
Amacandelo ombane, i-PLC, ukulandela umkhondo wefotoelectric kunye nokondla nge-servo kusetyenziswa ukulawula ukusebenza. Amandla ohlobo lomatshini afikelela kwi-100-120pcs iikomityi / min, ezifanelekileyo kwimveliso yee-ounces ezi-4-46 zeekomityi ezibandayo / ezishushu.
Isiqinisekiso soMgangatho woMatshini
Iinxalenye ze-1 zoMatshini ziqinisekisiwe iminyaka emi-3, iinxalenye zombane ziqinisekisiwe unyaka omnye.
Zonke iindawo ezikwitafile yokwakha zilula ukufikelela kulondolozo.
3.Zonke iindawo eziphantsi kwetafile yokwenza ziyathambisa ngokuhlamba ioyile. Ioyile kufuneka itshintshwe qho kwiinyanga ezi-4 ukuya kwezi-4 ngeoyile echaziweyo.
Imveliso yokuvelisa ukuya kwiikomityi ezingama-50,000 ngokutshintsha (iiyure eziyi-8), ukuya kuthi ga kwiikomityi ezizigidi ezi-4.5 ngenyanga (iishifti ezi-3);
2. Ipesenti yokupasa ingaphezulu kwama-99% phantsi kwemveliso eqhelekileyo;
Umqhubi omnye unokubamba oomatshini abaninzi ngaxeshanye.
I-shaft gear drive drive, i-cylindrical barrel indexing cam, yenza ubeko lwangaphakathi, ukuqinisekisa ukuchaneka kokuhambisa umatshini, ukusebenza ngokuhambelana okuphezulu, ukuze kufezekiswe ulungelelwaniso phakathi kohambo ukunqanda ukungqubana kwendawo, yenza i-jitter drive jitter kunye nokuhambisa ayigudisi Ukunqongophala kokuzalwa.
Ulwakhiwo lwamatyala ewonke
Uyilo lobumbeko lwesakhiwo somatshini, ukugalela ioyile yokuthambisa ioyile, ukunciphisa ukonakala kunye nokuchithwa kobushushu, umatshini osebenza ngokukhawuleza. Isiqinisekiso somatshini iminyaka emithathu.
Amaziko amabini eCurling
Ukujija kokuqala kunye nokwanda kwangaphakathi kokubumba okujikelezayo, kufanelekile ekuphuculeni amandla okwenza iphepha; isibini sokujija istereotypes, ivolumu entle, uzinzo olubonakalayo.
Inkqubo yomfanekiso weCCDD
Ukuchongwa kwekomityi (isitya) ngaphambili kwevolumu kunye nendawo yangaphakathi yebala, iingcongconi, iiphini, ukuqengqeleka komlomo, imibimbi. 2, ikomityi yokufumanisa (isitya) ngasemva emazantsi kunye neendawo ezijijekileyo zebala, iingcongconi, iipinoli, i-knurled flanging, isiphelo sephepha esivuthayo tyheli, ezantsi kwecrescent, ekupheleni kwamalungu ephepha.
Inkqubo yolawulo ekrelekrele
1, isakhelo seemodeli ezininzi. Sebenzisa i-windows elula ukukhokela, khetha imodeli esetiweyo.
2, useto oluguquguqukayo lweparameter. Unokwenza isipele, ubuyisele, okanye ubuyisele ipharamitha kumzi-mveliso. Unokuguqula iiparameter ngesandla ngokweenkcukacha.
3, Useto lweMvelaphi yokuSebenza ngokuSebenzisa kunye nokuSeta okuzenzekelayo kunye nokuzivavanya. Ufakelo lwezixhobo zekhowudi aludingi ukuqaphela indawo, unokuseta isoftware.
4, qwalasela ngokuzenzekelayo indawo yokupaka, ngaphantsi komlenze omnye ngokukhawuleza. Xa ubumbekile, umatshini ubala ngokuzenzekelayo umgama we-inertia womatshini, ubuncinci inyathelo elinye ngokukhawuleza kunesikhundla emva kokuncipha.
5, inkqubo yesitishi sesitshixo sokubonisa ukubala ngokuzenzekelayo kunye nokuchonga. Ngokwenza umsebenzi olula ukuqala iqhosha linokudibana nokwenza ukungaphumeleli, inkqubo yokulandelela ngokuzenzekelayo umqondiso ngokungqinelana ne-sensor, ukungunda kumise ngokukhawuleza phakathi kwezifudumezi zimbini.
6, misa indebe ngokuzenzekelayo isuswe. Emva kokuba umatshini eyeka ngokungaqhelekanga, inkqubo iya kususa ngokuzenzekelayo isifudumezi kunye nendawo ekubekwe kuyo isibiyeli ngenxa yesifudumezi esitshisiweyo kunye nokuncamathelisa akukho komityi eyomeleleyo.
7, inkqubo yokufudumeza ulawulo lobushushu olukrelekrele. Ngokusebenzisa ubushushu kulawulo lwe-PC PID, umsebenzisi ukhetha ngokulula umenzi wephepha, ubunzima, i-PE enye / ephindwe kabini, inkqubo iya kuseta ngokuzenzekelayo iqondo lobushushu ekujoliswe kulo, kwaye isantya somatshini siyatshintsha xa ubushushu ekujoliswe kubo buhlengahlengisiwe ngokuzenzekelayo. Umsebenzisi unakho nokwenza ikhefu lokulawula ubushushu ekujoliswe kulo.
8, inkqubo yokubonwa kwesiphene. Ukuchongwa oluzenzekelayo imilo indebe iphepha, ngaphakathi, iziphene ezantsi, ukususwa oluzenzekelayo. I-algorithm ekhethekileyo, ukukhanya kwebala elikhanyayo elichanekileyo lichanekile kwaye lizinzile. Isitshixo sokucwangcisa ngokukhawuleza iiparameter, kodwa kananjalo unokuguqula nganye iparameter ngokweenkcukacha. Inkqubo ixhasa ingxelo yangaphakathi yokujonga esweni inethiwekhi.
9, inkqubo yokujonga izixhobo. Amanqaku okuphuma kwe-Plc, ukuhambisa, ukunxibelelana, iplc kunye nescreen sokuthinta, i-plc kunye nekhompyuter, i-plc kunye nokwandiswa komgaqo-nkqubo wokubekwa kweliso lokwenyani, i-alamu engaqhelekanga kwiscreen sokuthinta ibangela unobangela wokungasebenzi kakuhle. Iinkcukacha zekhompyuter ezineenkcukacha kunye nokusilela kwesoftware, umsebenzisi ngokokunyanzelwa ukusombulula ingxaki ngokulula.
10, inkqubo ixhasa ukuphuculwa okukude. I-Plc kunye nescreen sokuchukumisa uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-Ethernet, ungayiguqula i-plc kunye nedilesi ye-ip yesikrini, nge-NAT okanye abanye ababoneleli beenkonzo ukuphucula ukude.
Egqithileyo Iphepha le fan / iphepha lephepha / iphepha elisezantsi lekomityi yephepha
Okulandelayo: Umatshini weNdebe ye-STD-80 eQhelekileyo
Umatshini weNdebe yePhepha le-SMD-90
No.1 Jeans Road, isixeko Haining, kwiphondo Zhejiang, China.
Sitsalele ngoku: + 86-573-87985826
UKUJONGA ICHENGDA OOMATSHINI CO., LTD